संकटको वेला काँग्रेसको अभिभारा « Anumodan National Daily
पूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ, अनिश्चित छ । खासगरी हामीले पछिल्लो पटक गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने सबैमा आशंका व्याप्त भएको छ । हामी सबै, व्यक्तिगत रुपमा म र हाम्रो पार्टी पनि अहिलेको संसद विघटनले देश र हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियालाई अबका दिनहरुमा कहाँ डोर्‍याउँछ ? भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिरहेका छैनौ । संसद विघटनको विषय अहिले संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र छ । अदालतले गर्ने निर्णयमा नै सम्पूर्ण कुराको निकास रहेकोले अब अदालतले के निर्णय गर्छ ?, कसरी संवैधानिक प्रक्रियालाई ट्रयाकभित्र ल्याउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक, आम नागरिक सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अहिले जुन संवैधानिक संकट उत्पन्न गरिएको छ, यसले देशभित्र अझ बढि अस्थिरता र अराजकता बढ्ने तथा विभिन्न प्रतिगामी तत्वहरुको चलखेल बढ्ने सम्भावन देखिदैछ । यो संकट आन्तरिक मात्र भएको भए यसको समाधान देशभित्रैबाट हुन सक्थ्यो । तर, अहिले मुलुकमा जसरी विदेशी चासोहरु बढ्दै गएका छन्, त्यसले हामी सबैलाई देशभित्र बाहय चलखेल बढेको अनुभव भइरहेको छ । अहिले घनिभूत रुपमा विदेशीहरुको चासो व्यक्त भएको पत्रपत्रिकाका समाचारले देखाइरहेको छ । उनीहरुको निरन्तर आवतजावत बढिरहेको छ । यी सबै कारणले अब कतै हाम्रो निर्णय क्षमता तथा देशका लागि हामी नेपालीहरु स्वयंले देखाउनु पर्ने क्षमता नै कमजोर भइरहेको त छैन भन्ने आशंका बढेको छ । हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि हाम्रो क्षमतामा ह्रास आएर कतै बाह्यशक्तिको हातमा पुग्छ कि ? अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरु नै निर्णायक शक्ति बन्ने हुन् कि ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिले सिर्जना गरिएको वा भएको जुन समस्या छ, यसको समाधान कतै हाम्रो देशको हितभन्दा पनि अराष्ट्रिय तत्वहरुको हित त हुँदै छैन ? हामी नेपाली भएर स्वाभिमानका साथ बाँच्ने हाम्रो गौरव र परम्परा देखिको हाम्रो क्षमता नै कतै गुम्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
अर्को प्रसंग संविधानबादको छ । हामी नेपालीले दशकौदेखि जनताको संविधानका लागि निकै दुःखकष्ट बेहोरेका छौं । २००७ सालमा जनक्रान्तिले निरंकुश जहानिया राणाशाहीको अन्त्य गरे पनि संविधानको स्थायित्वको अभावमा करिब सात आठ वर्ष संक्रमणकालिन अवस्था रह्यो । २०१४÷१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनले देशलाई अलिकति स्थायित्वतर्फ डोराउन थालेको थियो । संविधान तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुक अघि बढ्ने बाटो तय गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया र बाटो अवरुद्ध गरियो र फेरि पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा निरंकुश तानाशाही राज्य प्रणाली लादियो । यसले जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगायो । पञ्चायती व्यवस्था नामक निरंकुश एकदलीय राज्य प्रणाली लादिएपछि त्यसले मुलुकको गतिशिलता तथा राष्ट्र र समाजको व्यवस्थापनमा जनताको भूमिका तथा हाम्रा आन्तरिक समस्याको समाधानमा हाम्रो आफ्नो भूमिकाबाट बञ्चित गराइयो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो, तर त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई पनि हामीले क्रमिक रुपमा सुरक्षा र जर्गेना गर्न सकेनौं ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन तथा त्यसको बलमा बनेको २०४७ सालको संविधानका विरुद्ध माओवादीले कथित जनयुद्ध शुरु गर्‍यो । २०४७ सालपछि मुलुकमा शुरु भएको संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुकलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने तथा स्थायित्व प्रदान गर्ने बाटोमा जादै गर्दा माओवादी जनयुद्धका नाममा भएको हिसांत्मक द्वन्द्वले देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । त्यही माओवादी द्वन्द्वकै क्रममा विदेशीहरुले चलखेल गरेर विदेशीहरु तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको आडमा मुलुकभित्र फेरि जनआन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो । त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बाह्र बुँदे सम्झदारी गर्नुपर्ने बाध्यता भनौ अथवा जे परिस्थिति निर्माण गरियो, त्यसले नेपालीहरुले आफनो निर्णय क्षमता एक पटक पुनः गुमाए । यही परिवेशमा एकचोटी संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ संविधानसभाबाट नेपालको संविधान आएको छ ।
यद्दपि, यो संविधानमा अझैं पनि धेरै वर्ग र समुदाय तथा परम्परागत शक्तिहरुको केही विरोध वा असन्तुष्टि रहेको अवस्था छ । तर, संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोत मानेको छ । हामीले त्यो संविधानलाई सर्वोच्च, सार्वभौम मानेर अघि बढिरह“दा अहिले अनायास यो संवैधानिक प्रक्रियालाई तोडि“दा संविधानमा रहेका असन्तुष्ट आवाजहरु पुनः बाहिर आउने वातावरण बनेको छ । अहिले संसद विघटनका नाममा संवैधानिक विधि र प्रक्रिया तथा यसप्रतिको जनताको आस्थामाथि नैे संकट थप्ने काम भएको छ । कतै पुनः हामी संविधानबिहीनताको अवस्थामा त पुग्दैनौ ? आम नेपालीको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत भएको केपी शर्माओली नेतृवको सरकारले जसरी अहिले संसद विघटन गरेर स्वेच्छाचारी, गैरसंवैधानिक र अनैतिक कदम उठाएको छ त्यसको जति विरोध र आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रताप्रति निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु तथा आम नेपाली जनता सबैको मनमा कतै २०७२ सालको संविधानको उपलब्धीहरु त गुम्ने होइनन् ? भन्ने चिन्ता छ । कतै हाम्रो देश फेरि एउटा अन्धकार सुरुङभित्र पस्ने त होइन ? कतै हामी कुनै बँह्य शक्तिको प्रयोगमा मुलुकभित्रै आपसमै एक अर्काविरुद्ध लड्ने त होइनौं ? जातजातिका बीचमा, क्षेत्रीयताका नाममा, धार्मिक कट्टरताका नाममा वा अरु परम्परावादी सोचका नामा फेरि विभाजित त हुने होइनौ ? यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? चिन्ताको विषय छ ।
नेपाली काँग्रेस सधैं संविधानबाद र संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर विधिको शासन मान्ने पार्टी हो । संविधान र विधिलाई सर्वोच्च मानेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएकाले तथा कानुनी राज्यको मूल्यमान्यता स्वीकार गर्ने भएकाले अहिले जुन यो संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ यसबारे जनतालाई सुसूचित गर्दै यो संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन सहयोगी बन्न आह्वान गर्दै जनतालाई आन्दोलित गर्न का“ग्रेस अघि बढेक्ँे छ । सरकारको यो गैरसंविधानिक कदम विरुद्ध जनतालाई आन्दोलित गर्दै संसदको बहाली गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन आन्दोलनमा होमिएको छ । हाम्रा सबै समस्या जनताको प्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च, सार्वभौम संस्था संसदबाट नै निकास निकालेर नेपाली समाजलाई गतिशिल बनाउने र हाम्रा जति पनि आन्तरिक समस्या छन्, ती सबै नेपाली नेतृत्वबाट नै समाधान गर्न नेपालीहरुलाई सहभागि गराउन बाहेक नेपाली का“ग्रेससंग अर्को कुनै विकल्प छैन । यो संसदको सर्वोच्चता स्विकार गरेको पार्टी हो र त्यसकारण सबै समस्याको समाधान संसदबाट नै हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ । त्यसैले अहिले का“ग्रेसका सामु विकल्प भनेको असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संंसदको पुनर्बहाली नै हो र त्यसका लागि जनतालाई जागरुक गर्ने, जनतासामु जाने र सरकारको गैरसंवैधानिक कदम बदर गराउन सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन ।
अहिले पार्टीकै केही केही साथीहरु चुनावमा भाग किन नलिने ? भन्ने सवाल उठाइराखेका छन् । उनीहरु भनिरहेका छन्– अहिले सजिलो परिस्थिति आएको छ । हो, म पनि चुनाव हारेको व्यक्ति हु । मलाई केही गरी पार्टीले पुनः टिकट दियो भने सायद अहिले नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा का“ग्रेसलाई एक्तावद्ध गर्न सकियो भने म पनि चुनाव जित्न सकुला । यहा“निर मेरो स्वार्थ छ । मजस्तै स्वार्थ मेरा पार्टीका अरु नेताहरुमा पनि होला । कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने स्वार्थ होला । कसैलाई मन्त्री हुने स्वार्थ होला । कसैलाई हिजो संसदमा पुग्न नसकेको दुईतीन वर्षको पीडा होला र कति छिटो संसदमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा पनि होला । तर, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ वा चाहनाबाट मात्रै राजनीतिलाई हेर्नु हु“दैन । हामी ५०÷६० वर्ष राजनीतिक जीवनमा संघर्ष गरेका मान्छेहरु हाम्रो लक्ष्य मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मौलिक अधिकारको स्थापना, आर्थिक न्याय र समानता हो । यतिका वर्ष यी सबैका लागि लडेका हामीले आज व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर देशको भविष्यलाई नजरअन्दाज गर्यौ भने आउने पुस्ताले हाम्रो कसरी मूल्यांकन गर्ला ? यो अहम् सवाल हो ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको देश कतातिर जाँदैछ ? भन्ने विवकेपूर्ण चिन्तन हो । हिजो हामीले जे लक्ष्यका लागि वर्षौसम्म संघर्ष गर्यौं । हाम्रो पहिचान के हो ? का“ग्रेस भनेको निरन्तर प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो । देशको सार्वभौमिकताका लागि लडेको पार्टी हो र आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायका लागि लडेको पार्टी हो । आज घटनाक्रमले फेरी हामीलाई प्रश्न गरेको छ कि यो संकटको बेला हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य के हो र के हुनुपर्दछ ? हामीले देशलाई र आम जनतालाई काँग्रेस कहाँ उभिएको छ भनेर पुनः एकपटक काँग्रेसको पहिचान देखाउनु पर्ने वेला आएको छ । हिजोको का“ग्रेस र आजको काँग्रेसमा के भिन्नता छ ? विपी कोइराला जस्ता आजीवन आर्दशका लागि लडेको नेताको पार्टीका हामी कार्यकर्ता, गणेशमान सिंह जस्ता त्यागी नेताको पार्टीको कार्यकर्ता, किशुनजी जस्ता सन्त नेताको नैतिक चरित्रप्रति आस्था राख्ने हामीहरुले उहाहरुको संघर्ष, त्याग, बलिदान तथा उच्च नैतिक चरित्रका आधारमा राजनीतिलाई डोराउनु सक्नु पर्छ । हामी गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता अथक योद्धाको पार्टीका कार्यकर्ता । उहाँको सानिध्यमा काम गरेका हामी कार्यकर्ताहरु कसरी हाम्रो पहिचान बिर्सन सक्छौं त ? त्यसो हुनाले काँग्रेसले संसदलाई पुनः सुचारु गर्नका निम्ति जे–जस्तो कदम चाल्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन ।
अहिले कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छ । वडास्तरमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएका छन् । आन्दोलनमार्फत नेपाली जनतालाई जागरुक गर्न तथा देशको परिस्थिति र काँग्रेसको परिस्थितिबारे जानकार बनाउने क्रम अघि बढेको छ ।
जब संकट उत्पन्न हुन्छ तब विभिन्न मान्छेका स्वार्थ, तथा विभिन्न अप्ठ्याराहरु उत्पन्न गर्ने कुरा नौलो होइनन् । आज मुलुकको नेतृत्व असफल भयो भनिदैछ । भोली योभन्दा खतरनाक अवस्था आउन सक्छ । विभिन्न देशी, विदेशी तत्व, विभिन्न घुसप्रठियाहरुबाट विभिन्न किसिमका भ्रम तथा नाराहरु समाजमा ल्याउने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, संविधानलाई अवरुद्ध बनाएर भ्याकुम सिर्जना गर्ने र यसकै आडमा आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्न खेल्न उद्यत हुनेछन् । संवैधानिक विधि र प्रक्रिया कायमै रह्यो भने मात्रै सबैले आफनो कुरा भन्न पाउ“छन् नभए सडकमा भन्नुपर्ने हुन्छ । न्यायसम्मत ढंगले सबै विषयको न्याय गर्ने थलो संसद छदै छ । हामीले नेपाली जनतामा विश्वास गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको विवेकपूर्ण निर्णयले देशमा स्थायित्व, राष्ट्रियता, स्वाधिनता र आम नागरिकको अधिकारको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नै पर्दछ ।
नेता भण्डारीसंगको कुराकानीमा आधारित